Xildhibaan Idiris Dhakhtar oo Farmaajo ugu baaqay in uu is casilo | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Xildhibaan Idiris Dhakhtar oo Farmaajo ugu baaqay in uu is casilo
sidoo kale Qaar ka mid ah xildhibaannada Golaha Shacabka ayaa ugu baaqay madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in uu xilka iska casilo. Madaxweynaha ayaa la filayaa in uu maanta khudbad xasaasi ah oo la xiriirta xaalada dalka gaar ahaan dhacdooyinkii ugu danbeeyay ee magaalada Muqdisho uu ka horjeediyo Golaha Shacabka, isaga oo ka dalban doona sida wararku sheegayaan in Baarlamaanku ka laaabto go’aankii carrada badan dhaliyay ee muddo kororsiga.
Wuxuu sheegay in ay muhiim tahay in dalka la badbaadiyo sida uu hadalka u dhigay, madaama wali jidadka qaar magaalada Muqdisho u go’an yihiin siyaasiyiinta mucaaradka.
Kulanka maanta ee Golaha Shacabka ayaa ah mid siweyn isha loogu hayo iyo go’aanka Golaha Shacabku uu ka qaadan doono doorashada iyo in dib loogu laabto hannaankii 17kii September, madaama siweyn looga horyimid qorshihii muddo kororsiga ee 12kii April ay meelmariyeen.
Xildhibaan Idiris Dhakhtar oo Farmaajo ugu baaqay in uu is casilo was last modified: May 1st, 2021 by Admin
Boqolaal kun oo qof oo ka qaxaya duufaan ku wajahan galbeedka dalka Japan
Akhriro:-SJS oo ka dalbatay Madaxweynaha Soomaaliya inuusan saxiixin Xeerka Saxaafadda oo ay ku jiraan qodobbo dhibaateynaya xorriyadda saxaafadda